Umbhali wePalm Springs uAndy Siara kwiNihilism kunye neRekhodi yakhe yokuPhula iRekhodi - Iimuvi
Eyona Iimuvi 'Umbhali wePalm' u-Andy Siara wayamkela njani iNihilism
'Umbhali wePalm' u-Andy Siara wayamkela njani iNihilism
UCristin Milioti kunye noAndy Samberg eNeon / Hulu Iipalm Springs .UJessica Perez / Hulu
Xa uNyles ongakhathaliyo (noAndy Samberg) kunye nentombazana ehloniphekileyo yokuhlonipha uSarah (uCristin Milioti) benethuba lokuhlangana kumtshato wePalm Springs, izinto ziya zisiba nzima xa bezifumana bengakwazi ukubaleka kwindawo leyo, ngokwabo okanye omnye komnye. Nantso ke ingcaciso emfutshane egqunyiweyo enikezelwa ngabasasazi uNeon noHulu emva kokuba behlangene ukwenza imikhosi Iipalm Springs eyona ifilimu inkulu yokufumana i-Sundance Film Festival e $ 22 yezigidi . Kuyabukeka kwaye kuyacacisa, kodwa akunzima ukwenza ibali ngobulungisa.
Inyani yile yokuba uNyles noSara balwa ngokuchasene nemikhosi yezinye izizwe, eziqaqambisa ngobuqhophololo kwaye zandisa iimpazamo zabo ezikhoyo. Ukuzisusa kwinyani yesihogo ababanjiswe kuyo, kuya kufuneka baziphucule ngeendlela abangazange bacinge ukuba banakho. Yimbono ekrelekrele eyenziwe ngumlobi-bhanyabhanya uAndy Siara, obeka ubunzulu bobuNazi kunye nokungakhuli ngokweemvakalelo ukubonelela ngobunyani bokwenene kunye nokukhula okwenyani ngokweemvakalelo. Nguwo Usuku lwegroundhog exutywe ne Xa uHarry wadibana noSally kwaye ngobuqili yenye yezona bhanyabhanya zintsha zifike ngomnye unyaka we cinema odakisayo.
Umjongi uthethe noSiara ukufumanisa inkuthazo yoqobo emva kwefilimu, indlela ephuhliswe ngayo kunye nendlela evakalelwa ngayo ukuseta irekhodi leSundance ngaphambi Iipalm Springs ‘Ukuqala kwiHulu kaJulayi 10.
BONA KWAKHO: Uphengululo lwe 'Palm Springs': Ukufumana injongo kwi-String engapheliyo yanamhlanje
Umjongi: Ngaba ungahamba nam kwinqanaba lokuphuhliswa kwasekuqaleni Iipalm Springs kwaye yabakho njani?
UAndy Siara: [UMlawuli] uMax Barbakow kwaye sadibana kusuku lwethu lokuqala kwi-AFI phaya ngo-2013, saza nje saya kwangoko ngenxa yothando ekwabelwana ngalo ngamabhanti e-indie rock, iinkqubo zeTV kunye neemovie. Sobabini singabantakwabo abancinci, ke kukho imbono encinci ekwabelwana ngayo ngobomi. Saqala ukwenza iibhulukhwe ezimfutshane kunye e-AFI, kwaye ke xa sigqiba unyaka wethu wesibini, sacinga, Hee, masenze imovie yethu yokuqala kunye. Masenze into encinci kwaye iqulethwe esaziyo ukuba sinokuzama ubuncinci ukwenziwa. Ndizakuyibhala, uyalathise. Ke emva kweveki siphumelele, saphuma saya ePalm Springs, sobabini sinobudlelwane emva kokukhula kwi-Southern California. Besinempelaveki ekhululekile apho besithetha khona kude kube ngokuhlwa malunga no-mai tais kwaye sizama ukuqonda ukuba loluphi uhlobo lwemovie esifuna ukuyenza. Siphume kuloo mpelaveki singazi ncam, ngaphandle kokuba sibe neenkozo zomlinganiswa waseNyles. Kule minyaka imbalwa izayo kunye noyilo oluninzi kamva, abanye bazalwa ngaphandle kwencoko.
Ngenxa yokuba imovie yenzeka ngexesha elingenasiphelo kwaye inokuchukumisa umtya, ngoku ndifuna ukubona ezinye iidrafti zezinye iiholide kunye nezihlandlo ezinokuba ngumqhubi weenguqulelo zangaphambili.
Kuyahlekisa kuba elinye lamanqaku nakwesiphi iscript okanye imovie kukuba ndifuna ukwazi okungakumbi malunga nokubuyela umva kwalo mntu. Eyona nto yayiluncedo ngokuqala kwiinguqulelo ezahlukeneyo zebhanyabhanya ngaphambi kokuba songeze ixesha lokuvula kukuba ndibhale iinguqulelo ezininzi zeNyles. Amabali amaninzi angaphambili kunye nemvelaphi ukuze ndimazi lo mlinganiswa njengasemva kwesandla sam kwaye oko kuncede xa ekugqibeleni safika phezu kwantoni Iipalm Springs iya kuba. Xa sathatha isigqibo sokwenza ixesha lokujikeleza, ndaziva ngathi sendisele ndiyazi kwaye ndibhalile ukuba lwalunjani usuku ebomini ngaphambi kwalonto. Ke bekungekho mfuneko yokuba sichithe naliphi na ixesha kumdlalo bhanyabhanya sihlola ukuba kuya kwenzeka ntoni kwiNyles okokuqala xa engena emqolombeni okanye ngaphambi komtshato. Khange sichithe umzuzu kwelo hlabathi kuba sele ndibhalile. Umbhali uAndy Siara kunye noNyles (Andy Samberg), ubonisiwe.UChristopher Willard / Hulu
I-Nyles yile yokukhohlisa nantoni na edadayo-yakho-yesikhephe uhlobo lomntu, kwaye uSarah akathandabuzi phantsi komntu ongaphantsi. Uhlale njani kwezi mpawu njengokuchazwa kweziphene zomlinganiswa?
Into yokuqala ethi qatha engqondweni kukugqibela Usuku lwegroundhog , umlinganiswa ophambili uchaza intsingiselo yobomi, kwaye ufumana umvuzo ngokuphuma kwilogu. Kwaye ke, ukutsiba kwam kwindawo apho, bendifuna ukwenza umbono ophakamileyo. Ukuba umntu ubambeke kwilokhi yexesha kwaye abone intsingiselo yobomi, kwenzeka ntoni ukuba akasinikwanga isipho sokuphuma emgibeni? Kuthekani ukuba usabambekile apho, emva koko kwenzeka ntoni? Kwenza ntoni oko ebomini bakho? Ndicinga ukuba iNyles kufuneka ifumane intsingiselo kuyo yonke into engenantsingiselo. Kwiziyolo ezilula njengokuntanta emanzini, ukusela iibhiya kunye nokutya i-burritos, unikwe imeko kwaye ubambekile kwelo lizwe kangangeminyaka emininzi ebambekile, ungangabinankathalo. Kunzima ukukhathalela nantoni na kuba akukho nto ibaluleke ngokwenene. Imithetho elawula uluntu ayinamsebenzi kwakhona, ke ngoko uyayamkela le ngqondo ye-nihilism.
Omnye umlinganiswa kufuneka abenento ecela umngeni kwimeko ekuyo ngoku. Kufuneka bacelomngeni abanye abalinganiswa abaphambili. NgoSarah, uNyles uyaqonda ukuba kukho injongo ekukhathaleleni, kwaye ngeNyles, uSarah uyaqonda ukuba kufuneka azixolele kancinane kuba kukho injongo yokunyusa nje icala. Ndicinga ukuba siyazi kakuhle iNyles, kwakunzima ukujongana nembono yakhe ngobomi kwaye kulapho ubuqhetseba bukaSarah benziwa khona. Kujikeleze olu luvo lokuba ‘Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokucela umngeni kwaye umnyanzele ukuba atshintshe?’ Ngokwenza oko, kufana nokuba abalinganiswa babo baqondakala ngakumbi kuthi.
Into endiyithandayo Iipalm Springs Ngaba kukho abalinganiswa abaphambili abambalwa, kubandakanya uJ. Simmons 'uRoy. Oko kuyanceda ukuba kuthintele ukuphindaphinda okanye ukuguga kwaye ngokuthelekisa ngokuthe ngqo Usuku lwegroundhog . Ngaba eso yayisisigqibo esifanelekileyo sokwandisa umda kancinci?
URoy ebesisiqwenga sokugqibela sephazili ebesilahlekile kwaye eyona nto yokugqibela ndayifaka kwiskripthi kanye phambi kokuba siyigqibe. URoy, umlinganiswa, usebenza phantse njenga eli lithunzi ukuya eNyles, kwaye ndicinga ukuba singaya ngaleya ndlela okanye ungatsho nje ukuba imovie ibilahlekile le Wile E. Coyote / iimbaleki ezibalekayo ezisa umdlalo omkhulu. Yongeze le nto ingenangqondo kuyo enomtsalane kuzo zombini izinto esizithandayo. Kwinqanaba leemvakalelo, sazi ukuba kukho into engekhoyo. Yayingeyonto ingako eyaziwayo ukuba sifuna ukwahlula kwezinye iintlobo zeemovie. Kwakuninzi malunga nokuba sisiphi isithako esinokungqubeka ngokuchasene bobabini abalinganiswa kwaye sibatyhalele nangakumbi? Singawukhupha njani umxholo ngaphandle kancinci? Intetho kaRoy e-Irvine itshintshe ubuncinci ukusuka kulwaziso lwayo lokuqala kuba incoko yababini iyathetha kwaye imixholo inokutshintsha, kodwa into ayithethayo ekugqibeleni sisimo sebhanyabhanya.
Waziva njani xa ufumanisa ukuba Iipalm Springs wophule irekhodi lonke lokufunyanwa kweSundance?
Ndacinga emva kolo suku lokuqala xa mna noMax sadibana e-AFI kwaye ekugqibeleni sasikufutshane nabantu abafuna ukwenza izinto ezifanayo esifuna ukuzenza ubomi bethu bonke, ezazisenza imiboniso bhanyabhanya esisidenge imini yonke. Ndichithe iminyaka yam engama-20 ndikwiqela lokuphepha ukwenza naziphi na izigqibo zokwenene zabantu abadala, ezinje ngokungena nzulu ematyaleni ukuya kwisikolo sefilimu. Ayisiyo eyonanto elungileyo ukuyenza, kodwa ndicinga ukuba ndandisisidenge ngokwaneleyo ukwenza loo nto. Ndicinga ukuba ndonwabile ukuba ndikwazi ukuba nenxaxheba kubomi obungenanjongo. Ekugqibeleni ayinantsingiselo ukuba sithengise ngeyona mali ininzi.
Kodwa ndonwabe kakhulu kukuba ndiye ndabelana ngalo mzuzu noMax kwaye bendikolu hambo lungaqhelekanga naye phantse iminyaka esixhenxe. Lonke elo xesha sithetha ngezona zothando zethu zinzulu, kunye neentloni, kunye noloyiko, kunye nethemba, besingabantwana nje ababini abadlala kwibhokisi yesanti. Ukudlala ngeethoyi. Khange sicinge ukuba singenza nantoni na enokukhathalelwa mntu. Ke leyo yindlela ende enomoya wokuba asizange silindele ukuba nabani na abone okanye akhathalele ngale bhanyabhanya. Ndiziva ndinethamsanqa kakhulu kwaye ndinethamsanqa lokuba izinto ezininzi ziye zasebenza nje.
Olu dliwanondlebe luhleliwe lwaza lwafingqwa.
Iipalm Springs iyafumaneka ngoku ukusasaza kwiHulu.
Umgaqo weTrumps wemali
‘Abantu V. O.J. USimpson: Ibali loLwaphulo-mthetho lwaseMelika 'Ukuphindaphinda i-1 × 03:' Iqela lephupha? '
Iprojekhthi yeMiyalezo yoPolitiko kwiZakhiwo Ngaba leliQela leFeni lobuGcisa
Kutheni onke amashishini amatsha efuna ukucinga njengoChef waseBenihana
kutheni i-nickelback imbi kangaka
Ibali lezinto zokudlala 4 indawo yokubonisa iikhredithi
iphi i-u. isikhundla kwimfundo
I-turkey ithenga ioyile kwi-isis
odlala i-aida kwiiarhente zamakhaka
Izitulo zokunceda iintlungu zomqolo